အောင်လ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့်ပွဲ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုင်းကနေကြည့်ကြမလဲ… ? – NapannSan
အောင်လ နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့်ပွဲ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုင်းကနေကြည့်ကြမလဲ… ?
လာမယ့် အောက်တိုဘာ လ 13 ရက်နေ့ ကတော့ အာရှက MMA ပရိသတ်တွေအတွက် ထူးခြားတဲ့ နေ့တစ်နေလို့ဆိုရမှာ ဖြစ်ပြီး၊ အဲဒီနေ့မှာတစ်နေကုန် One Championship ပွဲစဉ်တွေကို တိုက်ရိုတ် ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန် မှာ ကျင်းပမယ့် အဲဒီပြိုင်ပွဲ ရဲ့ အမည် ကို One : Century လို့ အမည်ပေး ထားပြီး ၊ One Championship သမိုင်းကြောင်း တစ်လျှောက် အခမ်းနား ဆုံးနဲ့ အာရှ ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး MMA ပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီပြိုင်ပွဲ အတွင်း ကမ္ဘာကျော် ဖိုက်တာတွေရဲ့ ချန်ပီယံလုပွဲပေါင်း များစွာ ပါဝင်မှာ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ပွဲကိုလဲ Part 1 နဲ့ Part2ဆိုပြီး ခွဲခြား ကျင်းပ သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် အောင်လ အန်ဆန်း ရဲ့ ပွဲစဉ်ကတော့ Part2ရဲ့ အဓိက ပွဲအဖြစ် သတ်မှတ် ထားတာ ဖြစ်တာကြောင့် ၊ အောက်တိုဘာလ 13 ရက်နေ့ ရဲ့ ညနေခင်းလောက်မှာ စတင် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ကြဖွယ် ရှိနေ ပါတယ် ။ Part 1 ပွဲစဉ်တွေထဲမှာတော့ အမျိုးသမီး Atomweight World Championship လုပွဲ အဖြစ် စင်္ကာပူက နာမည်ကျော် ဖိုက်တာ အိန်ဂျလာ လီ နဲ့ တရုတ်သူ ရှောင်ဂျီနန် တို့က ထိုးသတ်သွား မှာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ဒါ့အပြင် Grand Prix Championship ရဲ့ ဗိုလ်လုပွဲတွေကိုလဲ ဒီကဏ္ဍမှာပဲ ဆက်လက် ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖလိုင်းဝိတ် Grand Prix Championship ဗိုလ် လုပွဲ အဖြစ် UFC ကနေ ပြောင်းရွှေ့ ထိုးသတ်လာတဲ့ ဒီမက် ထရီးရပ် ဂျွန်ဆင် ဟာ ဖီလစ်ပိုင် နိုင်ငံသား ဒန်နီ ကင်ဂတ် နဲ့ ဗိုလ်လုပွဲ အဖြစ် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်မှာပါ။ လိုက်ဝိတ် Grand Prix Championship ဗိုလ်လုပွဲမှာတော့ စင်္ကာပူ က ဖိုက်တာ ခရစ်ရှန် လီ ဟာ တူရကီ က အာစလာနာလိဗ် နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် သွားမှာပါ။ (အိန်ဂျလာ လီ နဲ့ ခရစ်ရှန်လီ တို့ဟာ မောင်နှမ တွေ ဖြစ်ပါတယ်။)မြန်မာပြည်က အခြား ဖိုက်တာ တစ်ယောက် ဖြစ်တဲ့ ဖိုးသော်ဟာ တောင်ကိုရီးယားက ဖိုက်တာ ယွန်ချန်မင် ကို Part 1 ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲ ထိုးသတ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous post သိန္နီမြို့ တွင် TNLA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူများ ဝင်ရောက်စီးနင်းမှုဖြစ်ပွား
Next post သိန်းနီ မြို့ ထဲ ဝင်ေ ရာက်ပစ် ခတ်မှု့ကြောင့် အရပ် သားအ ချို့ထိခိုက် ဒဏ်ရာရ